Canug dhashay isaga oo gacanta ku heysta kitaab qur'aan + Sawirro. - Caasimada Online
Home Nolosha Canug dhashay isaga oo gacanta ku heysta kitaab qur’aan + Sawirro.
Canug dhashay isaga oo gacanta ku heysta kitaab qur’aan + Sawirro.
Waxaa ay ahayd arin aad looga maqlay magaaladda Lagos ee dalka Nigeria kadib markii Hooyo Kiristan ah ay dhashay wiil gacanta ku haya Kitaabka Qur’aanka Kariimka, Qowlka eebe.
Qisadan waxaa ay ka dhacday Jidka 1, Sonde Street, Ijeshatedo, ee magaaladda Lagos waxaana dhashay canug kitaabka qur’aanka kariimka gacanta ku haya.
Hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Mrs. Kikelomo Ilori waana 32 sano jir waxaana ay sheegtay in wiilkan ay uurkiisa waday ilaa 10 bil.
Hooyadan aan wali laguursan ayaa canugan ku dhashay si sharci daro ah sida ay sheegtay.
Waxaa y sheegtay in ninkeedii uu ku diiday uurkan uuna usheegay in ay iska soo tuurto canuggan.
Sidoo kale Waxaa ay sheegtay in ay ka diiday dalabka ninka ee ahaa in ay canugan soo disho.
“markii aan diiday in aan uurka iska soo rido waa igu xanaaqay waxaana uu igu dhahay ‘taas waa dbibaato adiga kuu gaar ah’.” Mrs. Ilori ayaa sheegtay in canugan ay si layaab leh ku dhashay.
Waxaa ay tilmaantay in ay timid dhaqtar kadibna ay utagtay kal-kaaliso si ay udhaliso
“Markii aan aragnau in canugayga oo gacanta ku haysta Qur’anka , kal-kaalisadi ayaa igu dhahday waan tuuraynaa Qur’aanka. laakiin aniga ayaa ku adkaystay in aan tusiyo hooyadey kahor inta aan ficil la samayn,” Kikelomo oo ah gabar kiristan ah ayaa sidaas sheegtay.
“waxaan ku waaniyay iyada in aysan iska soo tuurin Uurka maxaa yeelay iyada ayaa udhiman kartay waxaan usheegay in allah ay tala saarato,” ayay sheegtay Hooyada gabdhan Apostle.
Madaxa Caafimaadka Bodet Hospital Ikeja ee magaaladda Lagos Dr. Bode Tawak ayaa sheegay in arintan aysan ahayn mid macquul ah “in canuga yar uu ku dhasho isagoo gacanta ku haya Kitaabka Qur-anka”.
“sidee ayay uwaaweyn yihiin gacmaha canugga? sida uu Kitaabka uweyn yahay? sidee kitaabka qur’aanka uga soo baxay halka dhalmada Hooyadda? magaran karo laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aadan sharaxaad ka bixi karin,” Dr. Tawak ayaa sheegay
Waxaa uu sheegay aina tani ay tahay mucjiso ka mid ah mucjsiooyin badan oo ka dhacday dalkaas.
Allah ayaa umadiisa ku tusaalaynaya wax walba si ay ugu ad adkaadaan.
Source: raaxadaguurka blogpost